के तपाईको बजार अवैध छ? | Martech Zone
के तपाईको बजार अवैध छ?
सोमबार, अगस्ट 30, 2010 शुक्रबार, जुन 19, 2015 Douglas Karr
अधिवक्ता डेभिड क्यास्टर, एक स्टार्टअपहरू र सास व्यवसायहरूमा विशेषज्ञताका लागि वकील फर्म, सप्ताहको अन्तमा मलाई ईमेल गरीएको समाचारको साथ FTC आफ्नो पहिलो शिकार संग बसे छ नयाँ प्रकटीकरण कानून को।
प्रस्तावित बस्ती (पीडीएफ) को हिस्साको रूपमा, पीआर फर्म Reverb संचार र मालिक ट्रेसी स्निट्करले कुनै पनि आईट्यून्स समीक्षाहरू हटाउनु पर्छ जुन सामान्य ग्राहकहरूको रूपमा प्रस्तुत रेवर्बका कर्मचारीहरूले लेखेका थिए र जसले रेभर्ब र यसको खेल विकासकर्ता ग्राहकहरू बीचको सम्बन्ध खुलाउन असफल भयो। एफटीसीका अनुसार सम्झौताले रेभर्ब र स्निटकरलाई आइट्यून्समा थप समीक्षा पोस्ट गर्न प्रतिबन्ध लगाउँछ जुन स्वतन्त्र उपभोक्ताहरूबाट हुने ढोंग गर्दछ वा कम्पनी र यसका ग्राहकहरूबीच कुनै सम्बन्धको खुलासा गर्न बेवास्ता गर्दछ, एफटीसीका अनुसार।
यो धेरै डरलाग्दो सामान हो। दुई दशकहरूमा, म सुनिश्चित छु कि मैले यो मार्केटिंग वा PR फर्मसँग काम गरें कि यसको ग्राहकहरूको वस्तुहरू र सेवाहरूको प्रबर्द्धन गर्न गएको छैन। म जहिले पनि र जहिले भए पनि मेरा ग्राहकहरूको प्रबर्धन गर्न जारी राख्छु - किनकि जनतालाई धोका दिनको लागि होईन, तर उनीहरूले जे हासिल गरेका छन् म विश्वास गर्दछु। म हरेक चोटि मेरो कार्यहरू खुलासा गर्न खोज्छु - तर म निश्चित छु कि मैले यो मार्क पर्याप्त मात्रामा छुटाएको छु।
यसले सबै कुरा परिवर्तन गर्न सक्दछ। तपाईंको कम्पनीले टिप्पणी रणनीतिहरू, लिinking्क गर्ने रणनीतिहरू, पदोन्नतीहरू, इत्यादि विस्तार गर्न चाहान्छ। यो सबै यो आपराधिक कार्य हुन सक्छ यदि यो संयुक्त राज्य अमेरिका भित्र पूरा भयो र कम्पनी र ग्राहकहरु बीच एक सम्बन्ध प्रकट गर्दैन भने।
हुनेछ नास्कर ड्राइभरहरू प्रत्येक अन्तर्वार्तामा उनीहरूका प्रायोजकहरूको घोषणा गर्नुपर्दछ किन कि तिनीहरूले टोपी लगाइरहेका छन् वा सोडा पिइरहेका छन्? के तिनीहरूले प्रत्येक बम्पर स्टिकर मुनि एक खुलासा राख्नु पर्छ?
हुनेछ राजनीतिक कार्य समिति (PACs) ले प्रत्येक साइटमा प्रत्येक टिप्पणीमा घोषणा गर्नु पर्छ कि तिनीहरू राजनीतिज्ञसँग भुक्तान गरिएको सम्बन्धको साथ संस्थाको हिस्सा हुन्? तिनीहरूले कसरी अनलाइन जवाफ सर्वेक्षण जान हजारौं सदस्यहरू पठाउँछन्?
यदि मaग्राहक उल्लेख गर्दछु प्रस्तुतीकरण वा भाषण उदाहरणको रूपमा जुन हाम्रो सम्बन्धसँग सम्बन्धित छैन, के मैले अब उनीहरू ग्राहक भएको कुरा प्रकट गर्न आवश्यक छ?
के बारेमा प्रशंसकहरू र अनुयायीहरूको गणना गर्दछ? मसँग खुलासा गर्ने माध्यम छैन कि कति व्यक्तिले मलाई पछ्याउँछन् र कति व्यक्तिहरू मैले अनुसरण गर्छन् किनभने उनीहरू ग्राहक हुन् वा म ग्राहक हुँ। के त्यो नम्बर सार्वजनिक धारणामा आधारित छ र मार्केटिंगको लागि प्रयोग गरीरहेको छैन?
मैले भर्खर एउटा लेखें ब्लगि book पुस्तक जहाँ मैले मेरा धेरै ग्राहक र विक्रेताहरू प्रयोग गरेको छु (सहित) एलेर्डिंग क्यास्टर) पुस्तकमा उदाहरणको रूपमा। के म जरिवाना लिन जाँदैछु किनकि मैले खुलासा गरेनौं कि हुन सक्छ, वा एकपटक ब्यापार सम्बन्ध छ?
हुनेछ उत्पादन प्रचारकहरू सम्मेलनहरूमा ब्याज वा टोपी लगाउनु पर्छ कि उनीहरूले आफ्ना ग्राहकहरु, उत्पादनहरु वा सेवाहरुका बारेमा कुरा गर्न जानेछन् भनेर?
कहिलेकाँही म लक्षित कम्पनीहरू र उनीहरूको बारेमा लेख्नुहोस्, वा भविष्यमा व्यापार सम्बन्ध निर्माण गर्ने अवसरको लागि मलाई परिचय दिनुहोस्। के म अब खुलासा गर्न आवश्यक छ जब म उनीहरूलाई कफि किन्छु वा उनीहरूको हात मिलाउँदैछु कि मँ गरिरहेको छु किन कि म उनीहरूको व्यवसाय पाउने आशा गर्दैछु?
हुनेछ सेलिब्रिटी भ्वाईस-ओभरहरू र विज्ञापनहरूमा देखा पर्न अब उनीहरूलाई समाप्त गर्नु आवश्यक छ उनीहरूलाई भन्दै कि तिनीहरू उत्पादन वा सेवाका लागि भुक्तानी गरिएको हो?
म बुझ्छु कि कानून असफल पार्न कोशिस गर्दै छ छली अभ्यास, तर समस्या यो हो कि मेरो सम्पूर्ण अनलाइन व्यक्तित्व, मेरो ट्विटर खाता, मेरो फेसबुक स्थिति, मेरो वेबसाइटहरू, र मेरो लेखन सबै सम्बन्धी आधारमा हुन् जुन मैले व्यवसायसँग गरेको छु। मेरो कम्पनीको आय मेरो ग्राहकहरु लाई कसरी मार्केट गरीन्छ मा आधारित छ। म तिनीहरूका लागि एक भुक्तानी अधिवक्ता हुँ - चौबीस घण्टा दिन र हप्ताको सात दिन। म कसैलाई धोका दिन कोशिस गरिरहेको छैन ... तर म आफ्नो ग्राहकहरूको तर्फबाट अधिकार, जागरूकता, र प्रचारकार्य बृद्धि गर्दैछु। म को को बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु ?!
तपाईले मलाई कफहरू अहिले पनि राख्न सक्नुहुन्छ र कुञ्जी पनि फ्याँक्नु हुन्छ।
वा म क्यानाडा सर्न सक्छु र म गरिरहेछु। त्यहाँ लुफोल मान्छेहरू छन् ... तपाईंको कपटी अभ्यासहरू अपतटीय स्थानान्तरण गर्नुहोस्।
टैग: एलेर्डिंग क्यास्टरडेभिड क्यास्टरप्रकटीकरणftcअवैधवकिलकानुनीमार्केटिंग कानून
असफलता: सफलताको रहस्य
Facebook तरीकाहरू फेसबुकको एनालिटिक्सबाट फाइदा लिन
अगस्ट 30, 2010 मा 11: 04 AM
मलाई लाग्छ यो हरेक कुरो र पागल भन्दा स than्घीय सरकारले खेल मैदानलाई स्तरोन्नत गर्ने प्रशंसनीय प्रयास गरिरहेको छ र धमिलो ब्यापारतिर धकेल्दै छ। मेरो मतलब भनेको के हो, सामान्यमा विज्ञापन अवैध बनाउँदै?
हुनसक्छ उनीहरूले कम्पनीहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ जुन भूमिबाट निर्मित मानिसहरुलाई बनाइन्छ - जस्तै क्रेडिट परामर्श सेवाहरू। ओह, मैले त्यसो भनेको थिएँ कि ठूलो स्वरले? LOL
मेरो साइट (सम्पादन गर्न क्लिक गर्नुहोस्)
अगस्ट,, २०१ 30 2010:२१ अपराह्न
यो विडंबनापूर्ण छ कि तपाईं, प्रेस्टन! FTC ले भर्खरै २०० भन्दा बढी पृष्ठहरू नयाँ नियमहरूमा क्रेडिट सेवाहरू संचालनमा जारी गर्‍यो। यो चीज एकदम नराम्रो नहुन सक्छ, किनभने यसले अधिकांश व्यवसायलाई व्यवसायबाट बाहिर धकेल्छ। हामीसँग एक ग्राहक छ जो उद्योगको सकारात्मक पक्षमा छ र निराश छ कि त्यसले ती ठगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ।
अवश्य पनि अन्तिम विडम्बना भनेको यो हो कि क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरूले उपभोक्ताहरूलाई बायाँ र दायाँ रिप - अफ गर्न जारी राख्छन् ... तर फिडहरू केही कम्पनीहरूले यसलाई ठीक गर्ने प्रयास गरेपछि जान्छन्!
यद्यपि म तपाईको साथ सारा हृदयले सहमत छु। यो एक मात्र व्यापार दम गर्न गइरहेको छैन, यो विदेश र अधिक व्यापार पठाउन गइरहेको छ FTC को पहुँच बाहिर!
उम, निश्चित छैन कि ती सबै उदाहरणहरू कसरी वैध तुलनाहरू हुन्। यसले चीजहरू भन्नुको नाटक गर्दछ जुन तपाईंलाई अन्त प्रयोगकर्ताको ज्ञान बिना भुक्तान गरिन्छ जुन तपाईंलाई त्यो कुरा भन्न भुक्तान गरिएको छ र यो यस विषयमा तपाईंको वास्तविक राय होईन। र वास्तवमा यो ती ठाउँहरू बारे हो जहाँ मानिसहरू झूट बोलेर फाइदाको लागि खडा हुन्छन्। प्रायः कानुनी कम्पनीहरू जुन एक कर्मचारी समीक्षा गर्दछ वा कुनै उत्पादनमा केही भन्छन् यस तथ्यलाई उजागर गर्दछ बरू १aवर्षको उमेरको केटा हो जसले खेललाई प्रेम गर्थ्यो वा आमाले जसले अमेजनमा किताब मन पराउँथ्यो। मलाई लाग्दछ कि यो पोष्ट गर्ने व्यक्तिको इमानदारी वास्तवमै के हो जुन यो भिन्नतामा तल झर्छ।
नास्कार - म निश्चिन्त छु कि हामी सबैलाई थाहा छ कि प्रायोजकहरू त्यहाँ पुगेका थिए त्यसैले तिनीहरूको स्पष्ट व्याख्या गर्नु आवश्यक पर्दैन। अब के रमाईलो हुन्छ भने कि ड्रग कम्पनीहरूले प्रायोजित सबै कारहरूलाई देख्नको लागि बिलबोर्डमा सबै साइड इफेक्टहरूको सूचीको ट्रेलर तान्नु पर्ने हुन्छ। 🙂
पीएसीहरू - यो अर्को गम्भीर मुद्दा हो जुन समान रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ तर दुःखको कुरा कहिल्यै होइन।
प्रस्तुतीकरणमा ग्राहकहरू - मलाई लाग्छ धेरै व्यक्तिहरूले गर्छन् र गर्नु पर्छ, किन पक्का छैन किन कि यदि तपाईं उदाहरणका रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने मानिसहरूले तपाईंलाई आफूले पाएको सफलताको बारेमा तपाईंलाई जान्न चाहन्छन् कि तिनीहरूले पनि तपाईंलाई भाँडामा लिएका छन्। हुनसक्छ मैले एउटा अस्पष्ट उदाहरण हराइरहेको छु जहाँ कसैले यसबाट फाइदा लिन सक्दछ (अन्य त सिधा बिक्री पिचहरू।)
फ्यान वा अनुयायी बन्न मूलतः बेकम्मा छ त्यसैले म श doubt्का गर्छु कि वास्तवमा कुनै पनि चीजको अर्थ हुन्छ। मेरो मतलब के तपाई साँच्चिकै जान्नुहुन्छ कि मलाई कसले पछ्याइरहेको छ। वा तपाईं आफ्नो गणना प्रयोग को बारे मा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईं कति राम्रो हुनुहुन्छ जब तिनीहरू मूल रूपमा बेकम्मा नम्बरहरू हुन्?
एउटा पुस्तकमा, मसँग एउटा प्रतिलिपि छैन (माफ गर्नुहोस्) त्यसैले म यो निश्चित छैन कि तपाईंले पुस्तकमा यसको बारेमा कसरी कुरा गर्नुभयो, तर लेखले थाहा पाउँदछ कि त्यहाँ त्यहाँ एक सम्बन्ध छ। यो अधिक स्पष्ट हुन सक्दछ कि तिनीहरू तपाईंको अघिल्लो / हालको ग्राहकहरू हुन्, निश्चित तर मलाई लाग्दैन कि कोहीले पनि यसलाई बेवास्ता गरेको बाहिरी व्यक्तिले पुस्तकको समीक्षा गरिरहेछन् किन कि उनीहरूले यसमा योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गरे। अब, म आशा गर्दछु कि तपाईं कतै उल्लेख गर्नुहुन्छ जुन तपाईंले उनीहरूसँग साइटमा काम गर्नुभएको थियो यदि तपाईं पुस्तकमा तिनीहरूलाई उदाहरणको रूपमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने। तर तपाइँले उनीहरूको साथ काम गरिरहनु भएको कुरालाई श्रेय दिन अझ धेरै कुरा छ (फेरी थाहा छैन यति प्रयोग कसरी गर्न सकिएन 'भन्नुहोस् यदि मलाई लाग्छ तपाईले जे गर्नुभयो त्यो गलत हो भनेर मान्नु भयो भने।)
मैले यसलाई २ टिप्पणीमा विभाजित गर्नुपर्‍यो 🙂
उत्पाद प्रचारक - हो! यदि तपाईंले व्यक्तिबाट पैसा पाउनुभयो भने तपाईं आफैंको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको छ भने यसको बारेमा स्पष्ट हुनुहोस्। यदि एमएससँग एमएस उत्पादनहरूका बारेमा सम्मेलनहरूमा धेरै समूहहरू थिए भने, वफादार प्रयोगकर्ताहरू यसका उत्पादनलाई उनीहरूको आफ्नै प्रेम गरेको देखाउँछन् र उनीहरूलाई भुक्तान गर्छन् कि त्यहाँ यसको बिरूद्ध एक ठूलो चिन्ता हुनेछ। जे होस् म कुनै पनि हिसाबले ओवरबोर्डमा जान्छु म त्यस चीजमा झुकाव राख्छु जबसम्म म WP को बारेमा कुरा गर्छु म निश्चित गर्छु कि म उत्पादनको लागि ठूलो समय हुँ र म कहिले पनि यस बारे केही भन्न को लागी भुक्तान गरिएको छैन। यद्यपि मैले पैसा कमाएको छु व्यक्तिको लागि चीजहरू अनुकूलित गर्ने।)
कफि खरीद गर्दै - फेरि मलाई लाग्छ यो दिईएकोमा फिर्ता जान्छ। कसैलाई विश्वास गर्न यो धेरै नै गाह्रो छ कि तपाईंले त्यसलाई बेच्नको निम्ति तपाईंसँग केहि पनि छैन तर जब तपाईं त्यो गर्नुहुन्छ।
विज्ञापनहरू - उनीहरूले पहिले नै यसो गर्छन् उनीहरूको "सशुल्क प्रशंसापत्र" जब एक वास्तविक व्यक्ति कुरा गर्दैछ। फेरी म यो लाग्छ कि यो 'दिएका छन् कि ती हुन् कि कसैले पनि सोधपुछ गर्दैनन्।
मलाई लाग्छ अन्तमा यो केहि ईमानदारीतामा आउँछ जुन भनियो भइरहेको छ र भनिएको कार्यहरूको आशय हो। प्रायः अवस्थाहरूमा जब हामीलाई विज्ञापन गरिन्थ्यो हामी यो जान्दछौं र जब चीजहरू गरिन्छ कि ती लाईनलाई धमिलो पार्न सकिन्छ मानिसहरूलाई यो हिज्जे अक्षर बनाउनुपर्दछ (जस्तै अखबारका विज्ञापनहरूमा भुक्तान गरिएको विज्ञापनहरू जुन लेख वा इन्फोमेरियल्स जस्तो देखिन्छ।) जब मानिसहरूलाई नक्कली बनाउन चाहन्छन् वा ती सम्बन्धहरू तिनीहरूसँग छन्। मलाई लाग्दैन कि इमान्दार विज्ञापन अभ्यासले चिन्तित पार्नुपर्ने केही चीज छ किनकि त्यहाँ अझै धेरै अनैतिक र फोहोरहरू छन् जसलाई पहिले तल लिन्छ।
तपाईं @ripsup धेरै धारणा बनाउनुहोस्, र तपाईंको अन्तिम अनुच्छेद मेरो सम्पूर्ण तर्क समर्थन गर्दछ। "यो सबै इमानदारीको लागि तल आउँछ ... र आशय।" म तपाईंसँग कम्तीमा असहमत छैन। त्यसोभए ... कृपया वर्णन गर्नुहोस् कि FTC कसरी डिसिफर गर्दछ कि म इमान्दार छु वा छैन मेरो इरादा के हो।
खैर FTC पहिलो सम्भवतः मात्र यसलाई हेर्ने हो यदि त्यहाँ गुनासो छ भने। यदि तपाईं अरू कोही भएको नाटक गर्दै हुनुहुन्छ वा लुकाउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईंलाई सकारात्मक (वा प्रतिस्पर्धी उत्पादनहरूमा नकरात्मक) भन्नुबाट केही फाइदा छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। लेखमा यो भन्छ
"रिभर्बले सरकारको साथ तातो पानीमा डुबेको आरोप लगाएर समीक्षा स्वतन्त्र उपभोक्ताहरूबाट आएको हो र यो ती खेलहरू प्रमोट गर्नका लागि भाडामा लिइएको हो र यो कुनै बिक्रीको प्रतिशतले लिएको छ भनेर खुलासा गर्न असफल भयो।"
म तपाईंको अन्तिम अनुच्छेदसँग सहमत छु कि तपाईं इमानदार हुनुहुन्छ (मेरो बारेमा तपाईंलाई के थाहा छ त्यसबाट कमसेकम) ताकि उनीहरूले त्यसमा मुद्दा फेला पार्दैनन्। तर यदि यदि तपाई दिनभर चचा पिम्प गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने कि तपाई केही स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुहुन्छ जब तपाईलाई भुक्तानी भइरहेको थियो त्यो मुद्दा हुनेछ। सबै अन्य विज्ञापन माध्यमहरूले यो नै मुद्दा पाएका थिए र यसलाई उपभोक्तालाई यस मुद्दाको बारेमा सूचित गर्न सक्ने तरीकामा तरीकाहरू पत्ता लगाए। यो नयाँ होइन र मलाई लाग्छ समान नियमहरू पहिले जस्तो लागू हुन्छ र किन मैले उदाहरणहरू लिएर मुद्दा लियो।
साइड नोट: म विज्ञापनमा बेलायतको नियमहरू प्राथमिकता दिन्छु जुन हाम्रो भन्दा कडा हो र हाम्रो इच्छा छ कि हामी पनि यस्तै प्रकारले अपनाउने छौं।
अगस्ट 31, 2010 मा 6: 17 AM
त्यहाँ सँधै बेइमान विक्रेताहरू हुनेछन् र, सामाजिकलाई धन्यवाद, शब्द यी केटाहरूमा बाहिर आउँदछ। जे भए पनि 'खरिददार होशियार रहनुहोस्', यद्यपि? के हामीसँग अब कुनै व्यक्तिगत जिम्मेवारी छैन? यसमा मेरो चिन्ताको एउटा कुरा यो पनि हुनेछ कि अधिक 'इमान्दार' कामहरू अपतटीय स्थानान्तरण हुनेछ किनकी मार्केटरहरू र पीआर एजेन्सीहरूले एफटीसीको नियमहरू उल्लंघन गर्ने डरले ढोका बन्द गर्न बाध्य छन् (जुन वास्तवमा कानून होईन मार्गनिर्देशन हो)। यो ठुलो भाई हो र म यसलाई खडा गर्न सक्दिन।
पुनश्च: जाओ चाचा! 😉
अगस्ट 31, 2010 मा 10: 10 AM
ठिक छ, मैले मेरो टिप्पणी सुरू गर्नु अघि, मलाई भन्न दिनुहोस् कि मसँग आधिकारिक व्यावसायिक सम्बन्ध छैन Douglas Karr, उसका विभिन्न कम्पनीहरू र वाणिज्यिक संस्थाहरू, न त म मेरो ब्लगमा भाग लिनबाट पैसा कमाउनमा प्रत्यक्ष रूचि राख्छु र त्यसपछिको कमेन्टरी जसले मेरो वा उसको वास्तविक भावनाहरू प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ वा सक्दैन। यसका साथै, कुनै पनि ब्यावसायिक रुचि जुन यो टिप्पणी गर्न लगाइएको हो कडाईका कारण स्वयं-प्रेरित प्रमोशनल वकालतमा गैर-वाणिज्यिक प्रयासको कारण हो, जुन सम्बन्धित कुनै चीजमा कुनै असर हुन सक्छ वा हुन सक्दैन।
राम्रो पोष्ट, डग।
अगस्ट,, २०१ 31 2010:२१ अपराह्न
म अर्को मान्छे डग्लस जत्तिकै फिसलन तिर लाग्ने बारे चिन्तित छु। तर तपाईले अन्त मा औंल्याएझैं, प्रश्नको अभ्यास स्पष्ट रूपमा छली थियो। यो खुलासा गर्ने कुरा थिएन, यो कपटपूर्ण कुरा हो "साधारण ग्राहकको रुपमा प्रस्तुत गर्ने"। यहाँ एक ठूलो चम्चा इरादा थियो।
बुझियो, इयान। तर FTC नियमहरू छलसँग बोल्दैनन् - तिनीहरू केवल खुलासासँग बोल्दछन्।
मलाई थाहा छ जब यो चीज भाँचे र मैले सोचे कि यो त्यस समयको कपटपूर्ण पक्षमा स्पष्ट थियो, त्यसैले गए र यसलाई माथि हेरे।
सीनेट लेख वास्तवमै उनीहरूले गरेको कुरामा जान सक्दैन र उनीहरूले भनेको कुरामा दुबै पक्ष लिन्छन् (सायद सम्झौताको कारण।) मलाई लाग्छ कि तपाईंले अर्को लेखलाई के हेर्नुभयो भने यो केहि अलि बढी स्पष्ट भएको थियो चलिरहेको छ र त्यो धेरै स्पष्ट कट थियो।
Ftc रिपोर्ट बाट एक उद्धरण।
"यी तथ्यहरूको खुलासा गर्न असफलता, प्रतिनिधित्वको आधारमा गरिएको थियो, र यो एक भ्रामक अभ्यास हो।"
सेप्टेम्बर 1, 2010 मा 12: 38 AM
@ripsup वाह ... त्यसो ... अझ नराम्रो। यो धारणा हो कि यदि तपाइँ प्रकट गर्नुहुन्न = तपाइँ धोकामा हुनुहुन्छ। =-X
सेप्टेम्बर 1, 2010 मा 12: 46 AM
"अस्वीकार छैन" + "गलत प्रतिनिधित्व गरियो" = धोका
प्रतीक्षा गर्नुहोस् जब सम्म तपाईं "सेक्सीहटचियरटिन १” "हुनुहुन्छ कि म भर्खरै एआईएममा च्याट गर्दै थिएँ र यही हो जुन तपाईं समस्यामा पर्न चिन्तित हुनुहुन्छ। मैले सोच्दा यो अनौंठो भयो कि जब विषय अचानक एकाएक चाचामा बदलियो। 🙂
सेप्टेम्बर १,, २०११ 1::2010० अपराह्न
मैले * सँग मेरो सम्बद्ध सम्बन्ध रहेको के अर्कोमा राखें र त्यो फेरि मेरो खुलासा पृष्ठमा जोडिएको छ। भयो
दुर्भाग्यवस, त्यसले डेभले काम गर्दैन। मैले पहिले नै त्यो विधिलाई डेभिडसँग अनुमोदन गर्ने प्रयास गरें र उनले भने कि म यसलाई मेरो TOS मा मात्र भन्न सक्दिन ... यो प्रत्येक उल्लेखको साथ इनलाइन हुनु आवश्यक पर्दछ।
सेप्टेम्बर 2, 2010 मा 8: 39 AM
डगलास, पोष्टका लागि धन्यबाद, यो एकदम चाखलाग्दो विषय हो। म भन्छु कि अभ्यास तपाईंको प्याकेजिagingमा नक्कली प्रशंसापत्रहरू राख्नु जस्तै हो। जहाँसम्म तपाइँको चिन्ताको सूची जान्छ, यसैले उनीहरूले उदाहरण सेट गरिरहेछन् जस्तो लाग्छ, सरकारले नेपस्टर र विगतमा एक साझा सर्भरमा एक लाख गीतका साथ व्यवसायहरूसँग गरेको कुरा जस्तै। यस्तो देखिन्छ कि तपाईंले उदाहरणहरू अलिकति चरम लिनुभयो होला, यो उदाहरणका लागि हो? म अनुमान लगाउँछु कि यस्तो कुनै पनि चीज नगर्नुहोस् जसले ग्राहकलाई उत्पादन किन्न धोखा दिन्छ र तपाईं सायद स्पष्ट हुनुहुन्छ।